DAAWO VIDEO:Warbixin Soo Koobaysa Ujeedada Dalalka Carabta Kula Heshiinayaan dalka Israa'iil. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Warbixin Soo Koobaysa Ujeedada Dalalka Carabta Kula Heshiinayaan dalka Israa’iil.
DAAWO VIDEO:Warbixin Soo Koobaysa Ujeedada Dalalka Carabta Kula Heshiinayaan dalka Israa’iil.
September 15, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Maanta 0
Wakiilada Isutaga Imaaraatka Carabta, Baxreyn, Israel, iyo dowladaha Mareykanka ayaa isugu imaan doona Washington, DC maalinta Talaadada si ay u saxiixaan heshiisyada Dhexmaray wadamada Khaliijka iyo Israel.
Heshiiska ayaa Gundhigiisa Ahaa soo afjarida qaadacaadii dhaqaale ee Imaaraadku ku sameeyay Israel wuxuuna ogolaanayaa suurtagalnimada hub casri ah oo Mareykanku uga iibiyo Imaaraatka.
William Hartung, oo ah agaasimaha Barnaamijka Hubka iyo Amniga ee Xarunta Siyaasada Caalamiga ah ee fadhigeedu yahay DC, ayaa u sheegay Al Jazeera iibinta hubka inay tahay “qodob muhiim ah” heshiisyada.
Imaaraadku waxay muddo dheer doonayeen diyaaradaha dagaalka ee F-35 , Hartung ayaa tiri, iyo drones waaweyn, oo Mareykanku awoodi waayey inuu iibiyo maadaama ay ka go’an tahay faa’iidada militari ee Israel.
Laakiin Trump Hada waxaa laga yaabaa inuu u arko Imaaraatka macmiil kale inuu yahay mid wanaagsan, Hartung ayaa tiri.
Mareykanku wuxuu kor u qaaday iibkiisa hubka 42 boqolkiiba adduunka sanadkii 2019, koror ku dhowaad $ 70bn, sida lagu sheegay tirooyinka ka soo baxay Forum on the Arms Trade (FAT) ee barnaamijka Iibinta Milatariga Dibadda ee Mareykanka.
Laakiin Bariga Dhexe Soo Iibsadashada Hubka Maraykanka waxaa ka Dulmaray hada Waqooyiga Afrika , lacagta Hubka Maraykanka Looga iibsadey Hubka Maraykanka waxau Gaadhey $ 11.8bn sanadka 2018 illaa $ 25bn in ka badan 2019, Morocco ayaa hogaamineysa iibsashada hubka Mareykanka, iyadoo ku dhowaad $ 12bn laga iibiyey .
Imaaraadku wuxuu ku qarash gareeyay in ka badan $ 4.7bn hubka Mareykanka sanadkii 2019, FAT ayaa diiwaan gashan, iyadoo Baxreyn ay ku bixisay $ 3.37bn, Qatar waxay ku bixisay $ 3bn iyo Saudi Arabia oo qiyaastii iibka Hubka Maraykanka Kubixisay $ 2.7bn.
“Baxrayn xaqiiqdii waxay ka faa’iideysatay wareejinta Mareykanka kadib markii Trump uu kor u qaaday culeyska F-16s… sidaa darteed waxay dareemayaan xoogaa aragti ah Helida Hubka Maraykanka.
Si kastaba ha noqotee, xaaladda heshiiskii F-35 ee lala galay Imaaraatka ayaa wali su’aal ka taagan tahay, maadaama ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu wajahayo dhaleeceyn uga imaaneysa dhanka midig .
Marka laga hadlayo guulaha siyaasadeed ee gudaha, Hartung waxay sheegtay in maamulka Trump uu “ku faani karo” Xirrirka Khaliijka Iyo Israel inta lagu jiro ololaha madaxweynenimada .
Tallaabadan ayaa “sidoo kale loo arki karaa inay tahay tallaabo lagu sii xakameynayo Iiraan”, oo ah bartilmaameed ay ka caroodeen maamulka Trump iyo cadow goboleedka oo ay leeyihiin Imaaraadka, Baxreyn iyo Israel, in kasta oo Hartung uu sheegay inuusan u arkin wax faa’iido ah.
Jon Alterman, oo ah madaxweyne ku-xigeenka sare ee Xarunta Istiraatiijiyadda iyo Daraasaadka Caalamiga (CSIS), ayaa u sheegay Al Jazeera halka waddamada Khaliijka ee Wanaajinaya xiriirka ay Israa’iil leedahay ay keeneyso su’aalo hor leh.
Alterman wuxuu sheegay in heshiiska lala galay Imaaraadku uu muujiyay in maamulka Trump uu awood u leeyahay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ka baxsan inuu sameeyo ” waxyaabo si dhakhso leh ugu lug leh madaxweynaha”.
Si kastaba ha noqotee, welwelka ayaa wali taagan oo ku saabsan geeddi-socodka nabadda ee Israa’iil iyo Falastiin, ayuu yiri Alterman. Heshiiska caadiga wuxuu wadada u xaari karaa in dowladaha kale ee waaweyn ee Carbeed ay caadi ka dhigaan xiriirka ay la leeyihiin Israel iyada oo aan wax laga qaban arrimaha salka ku haya khilaafka.
“Weli waxaa noo dhiman waddo dheer si aan u xallino khilaafka muddada dheer jiray,” ayuu yiri Alterman. “Waxaan rajeynayaa in tani ay calaamadeyn doonto dadaal lagu laba jibaarayo dadaallada halkii aan ka sheegan lahaa in la xaliyay.”
In kasta oo inta badan diiradda la saarayo saamaynta gobolka ee dawladaha Carabta, haddana Alterman wuxuu u qoray CSIS inay bixin karto “wadahadal ka sii xoog badan oo loo dhan yahay oo gobolka ka socda ayaa noqon kara hab wax ku ool ah oo lagu dhimi karo xiisadaha” u dhexeeya Israa’iil, Turkiga iyo Iiraan, oo ah saddex ka mid ah kuwa ugu badan gobolka. dalal awood leh – oo aan Carab ahayn.
Aragtida laga keenay Tehran
Israa’iil iyo dalal ay ka mid yihiin Imaaraatka iyo Baxrayn, oo ah ummad Shiicada u badan oo boqortooyo Sunni ah leh, ayaa in muddo ahba wada lahaa danta guud ee ah in Iran la sii daayo.
Laakiin Assal Rad, oo ah cilmi-baare sare oo ka tirsan Golaha Qaranka ee Iran-Mareykanku, uma maleynayo in ka mid ahaanshaha Iiraan ay ku jirtay “xisaabiyihii dhinaca Imaaraadka”.
Imaaraadka iyo Iiraan waxay leeyihiin xiriir dhaqaale oo soo jireen ah iyo qurbajoog aad u tiro badan oo qiyaastii 500,000 oo Iiraaniyiin ah ayaa ku nool Emirates, inta badan Dubai.
Dhoofinta Imaaraadku u diray Iiraan waxay dhantahay $ 10.23bn sanadka 2018, sida lagu sheegay tirakoobyada UN-ka ee ay soo xigatay Trading Economics, taasoo ka dhigaysa inay ka mid yihiin xulafada ganacsiga ee ugu sareeya Iran.
Laakiin Rad uma arko “caadi in ay qaadaneyso mowqifka ka dhanka ah Iran iyo in ay la jaan qaado Israel”, ayay tiri.
Haddii Imaaraadku qaadanayay istiraatiijiyad ka dhan ah Iran, shirarkii ugu dambeeyay ee u dhaxeeyay Wasiirka Arimaha Dibada ee Iran Mohammad Javad Zarif iyo Wasiirka Arimaha Dibada ee Imaaraatka Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, oo hogaamin doona wafdiga Imaaraatka Washington maalinta Talaadada, ma dhaceen.
“Waxay isku dayeysaa ficil isku dheelitirnaan ah. Uma arko in tallaabo looga soo horjeedo Iiraan. Waxay doonayeen hub casri ah this kaasoo heshiiskan suuragal ka dhigaya.”
Maxaa ka jira in Muqtaar Rooboow aad u xanuunsanaayo & farmaajo oo hal arrin loo sheegay
Magaalada Laascaanood oo Soomaliland Ku Fasaxday Dad Qaba Cudurka Covid19 Walaac Weyn oo Jira